BHG ဟက်ကာအဖွဲ့ ရဲ့ပေးစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » BHG ဟက်ကာအဖွဲ့ ရဲ့ပေးစာ
BHG ဟက်ကာအဖွဲ့ ရဲ့ပေးစာ
Posted by ဂျစ်စူ on Dec 14, 2010 in Computers & Technology | 1 comment
ကျွန်တော်တို့ BHG အုပ်စုသည် ရတနာပုံဝက်ဘ်ပေါ်တယ် ( Yatanarpon Web Portal) အပါအ၀င် စစ်အုပ်စု ၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်များကို တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါသည်။ ဤကဲ့သို့တိုက်ခိုက်နေရာတွင် ပိုမိုထိရောက် လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် စစ်အာဏာရှင်ကို မုန်းတီးသူတိုင်း ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် အထက်ပါအစီအစဉ်ကိုချမှတ်ခဲ့ကြ ပါသည်။
1. Download Microsoft .Netframe 3.5 and install it.
2. Download HIVE MIND LOIC and unzip it to your desktop.
3. Start LOIC with the LOIC.EXE
irc server = irc.antichat.ru
4. Select “hivemind mode”
5. Sit back and watch the show!
1. Launch JavaLOIC
2. Enter Target URL or IP and click LOCK ON
3. join #setup on LOIC for target info and settings (TCP and rest on defualt is usually best)
1. Install script for Debian/Ubuntu/Fedora
2. Run the script from terminal.
Server:irc.antichat.ru – port 7771
5. Sit back and watch the show
Target: http://www.kyaymon.info (ကြေးမုံအွန်လိုင်းသတင်းစာ)
Time: 18.12.2010 ; 8:00 PM ( မြန်မာစံတော်ချိန်)
တချိန်တည်း၊ တပြိုင်တည်း ညီညီညွတ်ညွတ်တိုက်ခိုက်ကြပါစို့။
http://blinkhackergroup.blogspot.com/ ဘလော့ခ်ကိုသွားကြည့်မိလိုက်တော့ irc server address တခုပေးထားတာတွေ့ရတယ် …. ။irc server = irc.antichat.ruport= 7771channel= #lcdပါတဲ့ဗျာ …….. ။ ရုရှားဆာဗာပါ …………….ရုရှားမှာ ဗမာထဲက ဘယ်သူတွေပဲ အများဆုံးရှိနေကြလည်းဆိုတာ အားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ် ။ ကျနော်ကတော့ ဒါဟာထောင်ချောက်တခုလို့ပဲမြင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပိုပြီး သတိထားစရာအချက်ကတော့ ကြေးမှုံ ၊ ရတနာပုံဝက်ပေါ်တယ်နှင့်တကွ အခြားသော ဝက်ဆိုဒ်များ ဟက်ခံရခြင်းဟာDDoS မဟုတ်ပါဘူး ။ web server ကိုသာဝင်ရောက် ကျူးကျော်လက်ကမြင်းသွားတာပါအမှန်တကယ်DDoSတိုက်ခိုက်ခံနေရတာဟာ ပြည်တွင်းဆိုဒ်တွေမဟုတ်ပါဘူး ပြည်ပကမီဒီယာတွေကသာ အမြဲမပြတ် ခဏခဏခံနေရတာပါ ။ သတိထားစရာအချက်တခုပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘုမသိဘမသိနဲ့ botnet တခုကို ကိုယ့်စက်ပေါ်မှာ တင်မိရက်သားဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် အခုရော နောင်ရော (botnet ကိုရှင်းမပစ်မချင်း ) သူတို့က ကိုယ့်ကို agent တခုအနေနဲ့ အမျိုးမျိုး အသုံးချတာပါခံနေရဦးမှာပါ ။ စဉ်းစားကြပါဗျာ စဉ်းစားကြပါ..အင်း …. ခုခေတ်ကြီးမှာDDoS ဆိုတာတောင်ဘာမှန်းသေခြာမသိပဲလည်း attack လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျ … ။ toolsတွေ တော်တော်ကြီးကိုပေါများပါတယ် ။အဲ့ဒီ toolsတွေကိုမှ မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တောင် ပိုက်ဆံပေးပြီး လူငှားနဲ့ attack လုပ်လို့ရနိုင်ကြောင်းပါ ။ ဥပမာအနေနဲ့ အောက်ကပုံများသာ ကြည့်တော်မူကြပါဗျာ﻿